Tignoolojiyadda - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Internet Bilaash ah-Qiimo jaban
Ma u baahantahay in lagaa caawiyo in gurigaagu internet helo?
Barnaamijka Xiriirinta Qiimaha jaban (Affordable Connectivity Program) waa qayb kamid ah kaalmooyinkii loogu tala galay bulshada kuwoodii ugu danbeeyay ee uu meelmariyay Baarmalaamku (Congress) si qoysaska baahida qaba looga caawiyo in ay helaan adeeg internet. Waxaa jira dhowr shuruudood oo ku xiran in aad xaq u yeelato barnaamijkaan waxaana kamid ah u qalmidda in aad ka qaybqaadato Barnaamijka Dheefaha Waxbarashada (sida caadiga ah loo yaqaano barnaamijka Cuntooyinka Bilaashka ah iyo kuwa Qiimaha jaban.)
Barnaamijkaanu wuxuu bixinayaa $30/bishii si loogu daboolo kharashka adeegga internetka guriga. Hoos waxaad ka helaysaa macluumaadka kaa caawinaya in aad go’aan ka gaarto in barnaamijkaanu ku anfacayo iyo in kale. Haddii aad ogaato in aadan xaq uyeelanayn barnaamijkaan aadna u baahato kaalmada ah in aad gurigaaga internet u hesho si canuggaaga(caruurtaada) ay ugu suurogasho in ay dhammaystiraan shaqadooda dugsiga, fadlan la xiriir dugsiga canuggaaga.
Su’aalaha Inta Badan Macmiilku Isweydiiyo - Su’aalaha iyo jawabaha ku saabsan xaq u yeelashada, sida loo codsado, adeegbixiyeyaasha ka qaybqaadanaya, dheefaha xiridda qalabka, dheefaha Qabiilka, iyo dheerarka barnaamijka.
Barta Macluumaadka Macmiilka Barnaamijka Xiriirinta Qiimaha Jaban
Aaladda Baarista Bixiyeyaasha Ka qaybqaadanaya - Hel adeegbixiyeyaal noocyo badan oo gudaha MN ka bixiya Dheefaha Noocyada badan ee Degdega ah. Kuwa soo socdaa waa link-yada (lifaaqyada) tooska ah ee Bixiyeyaasha ugu badan ee Adeegga Internetka guriga gudaha Degmada 196:
CODSO BARNAAMIJKA XIRIIRINTA QUIMAHA JABAN
1:1 Barashada Dhaqdhaqaaqa leh
Degmada 196 waxay u heellan tahay qaabdhismeedka barashada iyo teknolojiyada ee diiradda saaraya sidii ardayda loo siin lahaa khibrad waxbarasho oo firfircoon oo leh kordhinta helitaanka aaladaha dhijitaalka ah.
Iyadoo loo marayo barnaamijkeena barashada dhijitaalka ah ee 1: 1, ardaydu waxay u isticmaalaan iPads, Chromebooks, laptop-yo iyo laabab kombiyuutar sidii qalab waxbarasho oo dheeri ah oo diiradda lagu saarayo saddex meelood oo waaweyn: helitaanka iyo falanqaynta macluumaadka; cusbooneysiinta, abuurista iyo daabacaadda, iyo iskaashiga iyo wada xiriirka. Mid kasta oo ka mid ah aagaggan waxaan sidoo kale ku dhejinnay aasaaska muwaadinimada dijitaalka ah ee u oggolaanaya ardayda inay ku xirmaan khibradaha dhabta ah. Waxaan dooneynaa ardayda inay ka tarjumaan ficilladooda ah inay yihiin macaamiil muhiim ah iyo wax ku biiriyaha wanaagsan ee adduunka dijitaalka ah.
Foomka caawinta iyo taageerada tignoologiga >
Taageerada Infinite Campus